Qualcomm Snapdragon Wear 1100 puce navoaka ho an'ny fitafiana | Androidsis
Omaly nihaona izahay CPU sy GPU vaovao an'ny ARM ho an'ny zava-misy virtoaly ary ho hitantsika amin'ny fitaovana voalohany izay hiseho amin'ny fiandohan'ny taona manaraka. Ny SoC dia nisoratra anarana mivantana fitaovana misy mampiavaka azy isan-karazany toy ny mitranga amin'ilay ho hitantsika tsy ho ela avy any Qualcomm ary izany dia mitodika any amin'ny fitafiana azo ampiasaina.
Qualcomm dia nanambara ny SoC vaovao Snapdragon Wear 1100 ho an'ny fitaovana azo ampiasaina ao amin'ny Computex 2016. Ny Snapdragon Wear 1100 dia mifantoka amin'ny fitafiana azo ampiasaina toy ny famantaranandro marani-tsaina, fehin-tànana mihetsika ary karazana kojakojam-pitafiana hafa ilain'ny chip izay misy fika manokana.
Efa amin'ny febroary, Qualcomm dia nanambara an'ity chip manokana ity ho an'ny akanjo azo ampiasaina amin'ny Qualcomm Snapdragon Wear, a sehatra vaovao ho an'ny taranaka ho avy ny azo anaovana akanjo, ary ny rafitra Snapdragon Wear 2100.
Ny Snapdragon Wear 1100 dia manasongadina processeur iray miaraka Fampiharana miorina amin'ny Linux ary manolotra fanampiana ho an'ny serivisy Bluetooth, Wi-Fi, ary feo. Izy io dia mampiditra ny motera misy ny iZar tafiditra ao Qualcomm hanolorana fanatsarana angovo nohatsaraina, toy ny fiasa izay fantatsika avy amin'ny multi-GNSS, ny fametrahana ny cell-ID, ary ny fahafaha-manohana ireo fampiharana izay mampiasa geo-fencin ho an'ny fanaraha-maso azo antoka.
Qualcom dia milaza fa ny Snapdragon Wear 1100 dia natao ho an'ny akanjo fitondra mandimby manaraka izay takian'ny mpanjifa ny dian-tongotra kely kokoa, ny androm-piainany lava kokoa, ny sensor marani-tsaina kokoa, ny toerana azo antoka ary ny traikefa mifandray hatrany.
Ny mampiavaka azy hafa dia ny fahaizana mandany angovo kely kokoa misaotra ny Power Save Mode (PSM) sy ny modem Cat 1 manaraka miaraka amin'ny fanohanan'ny tarika LTE / 3G manerantany. Ny SoC koa dia mampiditra motera crypto, mpamorona isa nomerika HW ary TrustZone.
Ity puce Snapdragon Wear 1100 ity dia misy ara-barotra ary tokony hanolotra karazana akanjo azo ampiasaina amin'ny Android Wear sy bateria nohatsaraina tsy ho ela isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Qualcomm dia mandefa chip Snapdragon Wear 1100 ho an'ny fitaovana azo ampiasaina
Ahoana ny fiasan'ny fiantohana RHA?